IApartment yePhupha ye-Art Deco
EVienna, Vienna, Austria
Ndimangaliswe bubuhle bobuhle beli khaya lemveli laseViennese. Indawo inempahla ye-boutique kunye nokuhombisa, umdibaniso wezinto zakudala kunye nezigqityiweyo zangoku, kunye nokutshiza okumnandi kombala kuyo yonke.
4.78 (iingxelo zokuhlola 294)
Ikota yozakuzo ilele kwisithili sesi-3, "Landstrasse", kwaye isingathe uninzi lozakuzo bamazwe ngamazwe. Ibekwe kumbindi weVienna ngeendawo ezibonayo eziphambili ngaphakathi kohambo lwemizuzu eyi-15. Indlela engaphantsi, iimoto zesitrato, kunye neebhasi zikufuphi ngokunjalo.
Umgama ukusuka eVienna International Airport
imizuzu eyi-17 ngemoto xa indlela ingaxakekanga
Idiphozithi Yokhuseleko - ukuba wenza umonakalo kwikhaya, usenokubhataliswa ukuya kutsho kwi-R9019
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Vienna